Best & Bara Uru Assam Tour ngwugwu | Maka Nkọwapụta Nkọwa Na 91-993-702-7574
Ngwakọta Ngwakọta Assam
Gwa onye njem ahụ n'ime gị Pebbles Sand Ngwakọta Ngwakọta Assam. Assam nwere mmasị ndị njem nleta maka ụdị njem ọ bụla, bụrụ onye na-ahụ n'anya, onye na-awagharị anya, onye na-anụ ọkụ n'obi na-akpali mmasị, onye hụrụ anụ ọhịa ma ọ bụ onye na-ese foto. Ikekọrịta ókèala ya na Bhutan, Nagaland, Manipur na Mizoram, Assam bụ obodo mara mma nke a maara dịka 'ọnụ ụzọ ámá North East'. Ngwakọta Mgbapụta Assam na-enye gị ohere ịchọpụta njem a dị egwu. Assam bụ ala nke mara mma na obi ụtọ, ala nke dike Brahmaputra na-asọ. Ngwakọta zuru ezu Assam Tour bụ ngwakọta zuru okè nke ọdịdị, ọdịbendị, na akụkọ ihe mere eme. Ndị ọkachamara njem anyị na-emepụta nchịkọta ndị a iji nye ezumike ezumike na-enweghị ntụpọ maka ndị njem. Ịgba ọsọ nke ihu igwe na-ekpo ọkụ, ebe dị egwu, ebe ndị dị na tii, mmiri mmiri na-asọ asọ, ebe mara mma na ebe dị mma, Assam bụ ebe ị ga-eme ka ndụ gị zuru ike. Ngwakọta ngwugwu Assam ga-emezu fantasy njem gị.
Anyi juputara n'osisi na umu ohia kachasi nma, ihe mara mma nke mara ugwu, osimiri na uzo di iche iche, na omenala ya nke ememe na ememe. Ị nwere ike nweta Best nke Assam Tour na Sand Pebbles Assam Tour ngwugwu. Assam bụ onye na-emepụta osisi Timber na Tea kachasị ukwuu na mba ahụ ma nwee mmanụ kachasị ọhụrụ n'ime mmanụ n'India. Ndị ọzọ karịa Timber na Tea, a na-enyekwa Assam Petroleum, Natural Gas, Coal, Limestone etc. Assam bụ ala nke omimi, ndụ na akụkọ ntolite. Ọ bụ otu n'ime obodo kachasị oké ọhịa nke India. A makwaara Assam maka ihe ndị aka ya na-eme na cane, bamboo, bras wdg. Gbalịsie ike ịchọpụta ebe a dị omimi na Sand Pebbles Tour.
Shillong na Guwahati
Ụsọ Oké Osimiri Ebe Ọwụwa Anyanwụ